Diyaar-garoowga Dhuus-mareeb miyuu Farmaajo Booqanayaa meel ka baxsan Galmudug? - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Diyaar-garoowga Dhuus-mareeb miyuu Farmaajo Booqanayaa meel ka baxsan Galmudug?
Diyaar-garoowga Dhuus-mareeb miyuu Farmaajo Booqanayaa meel ka baxsan Galmudug?
January 14, 2018 Cali Yare466
Magalaada Dhuusa-mareeb ee Caasimadda Maamulka Galmudug balse hada Xarun u ah Ururka Ahlusunna ee la Magacbaxay Maamulka Gobolada dhexe ayaa kamid goobaha laga sugayo imaatinka Madaxwaynaha Somalia Maxamed Cabdulaahi (Farmaajo). Dhuusa-mareeb waxay u Diyaar-garoobaysa si ka duwan Magaalooyinka kale ee Galmudug waana Magaalo doonaysa inay kasoo kabato dibu dhacyo Sanado Ragaadiyay. Balse Xaalada Magaalada iyo Diyaar-garoowga ayaa wax badan layska waydiinayaa.
Safarka Madaxwaynaha Somalia ee Dhuusa-mareeb waxuu imaanayaa ayadoo uu jiray Heshiis Dhexmaray Galmudug iyo Ururka Ahlusunna ee Gacanta ku haya Magalaada hasee ahaatee 10/1/2018 Markii la ogaaday in Farmaajo doonayo inuu gaaro Xarunta Gobolka Galgaduud War-Saxaafadeed kasoo baxay Maamulka waqtigaan ka arimiya Dhuusa-mareeb ayaa lagu sheegay in aan Magaalada lala Soo gali karin Ciidan iyo Astaamo an ahayn Kuwa Ahlusunna waxayna taasi meesha ka saartay in Ciidankii Dowladda ee 21ad iyo NISA ee ay tagaan Magaalada si ay sugaan Amniga Madaxda Galmudug iyo Dowladda ee doonaya inay tagaan Dhuusa-mareeb. Waxaa kaloo meesha kabaxday in Gaadiidka Maxda Galmudug ee ay ku xiran yihiin Astaamaha Galmudug ay gali karaan Magalaada. Afhayeenka Galmudug oo Amarkaas ka hadlay waxuu sheegay inuusa jirin Maamul aan Galmudug ahayn oo ka jira Galgaduud ayadoo laga duulayo Heshiiskii Jabuuti iyo Muqdisho.
Magalaada oo lagu xardhayay Astaamo iyo Sawirro Logu Soo dhawaynayo Madaxwaynaha Somalia Waxaase laga Mamnuucay in lagu Xardho Calanka Galmudug iyo Sawirka Madaxwayne Xaaf waxaana loo ogo laaday Calanka Somalia oo kaliya.halka ay Baaritaano Adag wadaan Ciidanka Ahlusunna si ay u ilaaliyaan Xaqiijinta Amaradii 10-ka bishaan. Muuqaalka Soo Dhawaynta Farmaajo ee Dhuusa-mareeb ayaa u eg inuu Booqanayo meel kabaxsan Galmudug iyo Maamuladaa Xubnaha Dowladdiisa.
Amison ayaa doonaysa inay la Wareegto Amniga Magalaada si meesha looga Soo Ciidanka Ahlusunna ee baryihii u danbeeyay Farmuuqa .Handadaada.Xariga Iyo Baaritaanada Xad dhaafka ah ku hayaay Masuuliyiinta iyo Bulshada doonayaso inay ka qayb qaataan Soo dhawaynta Madaxwayne Farmaajo Wafdigiisa iyo Madaxwayne Xaaf.
Madaxwaynaha oo Gaalkacyo ku sugan ayaa imaandoona Cadaado oo Xarun KMG ah u ah Galmudug waxaana kadib lagu wadaa inuu gaaro Magaalooyinka Cabud-waaq iyo Dhuusa-mareeb waloow an la sida uu ugu kala hormari doono
Somaliland oo raadinaysa Fure Isgaarsiineed oo ka madaxbnaan Somalia
Manchester United Oo Hishiis La Gaartay Alexis Sanchez
Sawirro: Baarlamaanada Galmudug iyo Ahlusuna oo la mideeyay